के नेकपा एसमा मन्त्री बन्न पैसा बुझाउन पर्छ ? के हो सत्य कुरा ? -3ghumti
के नेकपा एसमा मन्त्री बन्न पैसा...
आश्विन २७, २०७८ बुधवार १२:३० बजे
काठमाण्डौँ । नेकपा एमाले विभाजन गरेर बनेको नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मोटो रकम लिएर किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेलाई मन्त्री बनाएको आरोप लागे पछि नेकपा एस बोलेको छ ।
त्यसैले त्यसमा कुनै कमी कमजोरी छ भने सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पक्कै पनि हामीले धेरै जनालाई पठाउन सकेका छैनौं । कतिपय कामको मूल्यांकन गरेर मन्त्री बनाएका हौं । विद्रोहको अग्रपंक्तिमा रहेका साथीहरु पार्टी निर्माणमै लागौं भन्ने कुरा छ । मन्त्री भएका सबै जना जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । यसलाई विवादित भन्नु बेकार हो ।”
# नेकपा एस